Wasaaradda biyaha oo kormeertay machadka tababarka biyaha iyo korontada - Halbeeg News
Wasaaradda biyaha oo kormeertay machadka tababarka biyaha iyo korontada
MUQDISHO(HALBEEG)-Saraakiil ka socotay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kormeer ku tagay machadka tababarka biyaha iyo korontada ee magalada Muqdisho.
Saraakiishan ka socotay wasaaradda oo uu horkacayay wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, mudane Cismaan Libaax ayaa soo indha indheeyay habka uu socdo dib u dhayactirka xurantan oo heer gabo gabo ah mareysa.
Kormeerayaasha ayaa sidoo kale mid mid u soo kormeeray qeybaha kala duwan ee Machadka tababarka biyaha iyo korontada, Sheybaarka hubinta tayada biyaha iyo wakaaladdii hore ee biyaha.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, Cismaan Libaax oo warbaahinta kula hadlay xarunta ayaa sheegay in haatan uu soo gaba gaboobay dhismaha sheybaarka hubinta tayada biyaha ay dhawaanna qalabeyn doonaan si sheybaarku uu u billlabo howlihiisii caadiga ahaa.
“Wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha iyada oo dar dargelineyasa go’aannadii ama siyaasadii madaxweynaha iyo siyasadii kale ee uu ra’iisul wasaaraha ku shaqeynaayay oo ku saabsan xagga tayada biyaha waxaa dhamaaday dhismha sheybaarka waxaana dhiman qalabeyntiisa iyo machadkii tababarka” ayuu yiri Cismaan Libaax.
Wasiir Libaax ayaa sidoo kale sheegay in dhawaan ra’iisul wasaaraha dalka , Xasan Cali Khayre uu xarigga ka jari doono machadka kadib marka loo dhameeyo qalabeyntiisa.
Wasiirka ayaa carrabaabay sida uu ugu faraxsan yahay dhameystirka dhismaha machadka isaga oo u mahad celiyay hay’adaha IOM iyo bangiga horumarinta Afrika oo gacan ka geystay dib u dayactirka dhismayaashan.
“Waxaan ugu faraxsanahay in dhismahaan halkna uu soo gaaro, muddana la soo waday. Waxaa runtii caawiyay dhismasyaashaan Bangiga Hormarinta Afrika waxaana fuliyay hay’adda IOM” ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiir Libaax.
Wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in wixii haatan ka dambeeya laga maarmi doona sheybaarradii biyaha ee loo aadi jiray dalka dibaddiisa machadkanina uu ka jawaabi doono buuxinta baahiyahaas.
“Dhawaan waxaan heli doonaa in tayadii biyaha Nairobi iyo meelo kale iyo meelo kale oo private ah [ gaar loo leeyahay] la geyn doonin aan lagu baari doonin” ayuu yiri wasiirka.
Wasiirka ayaa sidoo ballan qaaday in dhawaan wakaaladdii hore ee biyaha ee ku burburtay dagaalladii sokeeye ee dalka ka dhacay dib u dhis lagu sameyn doono islamarkaana ay xarun rasmi ah u noqon doonto wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha oo haatan ku shaqeysa xarun kumeel gaar ah.
Booliska Kolombos oo baaraya shil ay ku geeriyoodeen laba gabdhood oo Soomaali ah
Shaqaalaha Soomaalida ah ee xarunta Xalane oo hakad la galiyay shaqooyinkoodii